Taunggyi - The Cherry Land: ပြိုင်ပွဲဆုရ မေလွင်ဦးရဲ့ ဓာတ်ပုံများ
ရေးသားသူ yma အချိန် 9:37:00 PM
သူရိုက်တဲ့ပုံ ၁၀ပုံမှာ ၁၀ပုံလုံး မကောင်းနိုင်ပါဘူး
သူရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေ ကောင်းသလို ရဲမြန်မာရိုက်တဲ့ ပုံ
သူရိုက်တဲ့ တချို့ညမီးပုံပျံတွေက အလင်းများပြီး နေ့မှာရိုက်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်။
ဒီဘလော့မှာ တင်ဖူးတဲ့ ရဲမြန်မာပဲ ရိုက်ထားတာလား မသိဘူး.. ညမီးပုံးပျံက တချို့ပုံတွေ အယူအဆ၊ အချိန်အဆ၊ စိတ်ကူးလေးတွေ
တော်တော်ကောင်းတာ တွေ့ရတယ်။ ကြိုက်လွန်းလို့ ကျွန်မ ဘလော့မှာတောင် ယူထင်ထားပါသေးတယ်။
ကင်မရာကို မသိမ်းလိုက်ပါနဲ့ ကျွန်မတို့ ပုံတွေ မကြည့်ရဘဲ ဖြစ်သွားမှာပေါ့း)
ရိုက်ဖန်များမှ ကိုယ့်အားနည်းချက်ကို သိပြီး လက်ရာတွေ ပိုကောင်းလာမှာပါ။
ကင်မရာကို ထည့်သိမ်းထားလိုက်ရင် ကိုယ့်လက်ရာ ဘယ်တော့မှ တက်လာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၀ါသနာပါနေသရွေ့ ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ ဆက်သာလုပ်ပါ.. ဆက်သာရိုက်ပါ။ အားပေးနေပါတယ်..
Thursday, November 29, 2007 1:48:00 AM
ko yemyanmar, don't keep ur camera. like that who will going to upload some photos.. yeah i do agree with u of that girl talent.. just 9th standard student.. ok ok.. don't keep ur camera naw.. cheers!
At least your photos could make those people away from Tgi happy, and remember the day that they had fun in Tgi together with friends.
So, whether if you think it is useless for anything, but useful for those people who are away from Taunggyi.
ko yemyanmar ရေ... Camera ကြီး သိမ်းမထားပါနဲ့။ ဆက်ရိုက်ပါ။ ပုံတွေဆက်တင်ပေးပါ။ ကြည့်ရသူတွေက ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်။
Practice.. Practice.. Practice.. :) :) :)
Saturday, March 26, 2016 9:05:00 AM